Ampidino Rindrambaiko ho an'ny Windows
MyPaint dia tonian-dahatsoratra mandroso ho anny mpanao hosodoko nomerika. Ny tonian-dahatsoratra, izay mihetsika toy ny hoe miasa amina lamba nomerika noho ny borosy sy ny vokany isan-karazany dia rindrambaiko malalaka malalaka. Aminizany fomba izany dia azo atao ny mahita add-on maro hanatsarana ny programa ary misy iray vaovao izay...
PanoramaStudio dia mpamoaka sary izay mety mahasoa raha te-hamorona sary panorama vaovao ianao na raha te-hanitsy sy hamerina hamerina handinika ireo sary panorama anananao. Manana faritra miasa malalaka ao aminny PanoramaStudio izahay, izay manome ny mpampiasa interface tsara madio sy tsotra. Ny programa dia mamela anao hanambatra sary...
Watermark Software dia programa watermark izay manampy ny mpampiasa hisoroka ny fangalarana sary ary manampy sonia nomerika aminny sary. Androany, mampiasa sary isan-karazany isika aminny bilaoginay manokana, lahatsoratra na aminny atiny samihafa izay zarainay aminny Internet. Ny fampiasana tsy ara-dalàna ny sasany aminireo sary ireo,...
Google Nik Collection dia programa maimaim-poana azonao ampiasaina rehefa te-hanova ny sarinao aminny fomba matihanina ianao. Ilay programa, izay misy sivana tsy ilaina, vokany ary fitaovana fanovana ho anny mpampiasa amateur, dia miaraka aminny safidinny fiteny tiorka satria mitondra ny sonianny Google izy. Azo atao ny mamadika ny...
iPhotoDraw dia programa maimaimpoana sy mora ampiasaina izay ahafahanao manova sy miasa aminny sary sy sary aminny solosainao. Aminny fampiasana ny interface ny programa izay ho zatra eo noho eo, dia afaka manampy lahatsoratra aminny rakitra sary, manoritra tsipika, manoratra naoty ary mametraka endrika hafa tadiavinao ihany koa. Ny...
SHU, апликацијата што им овозможува на корисниците да прават слики од екранот и да споделуваат веднаш, објави нова верзија на SHU, насочена кон заедницата со повеќе од една милијарда играчи. Покрај поддршката на 4K резолуција, софтверот може да работи и беспрекорно дури и кога ги играте најновите игри во режим на цел екран. SHU ги...
FastPictureViewer dia mpijery sary kely nefa haingana izay afaka mihazakazaka eo ambaninny rafitra fiasa Windows XP / Vista / 7. Miaraka aminny FastPictureViewer, izay manome fahafaha-manao ho anireo mpampiasa manana rakitra an-jatony na anarivony ao aminny arisivany, azonao atao ny maka tahaka fotsiny ny sarinizy ireo na aiza na aiza no...
SnapX dia rindrambaiko iray manome vahaolana ho anny mpampiasa hisamborana pikantsary. SnapX, programa pikantsary azonao sintonina sy ampiasainao maimaimpoana tanteraka, dia programa natao hanamboarana ny asanny fakana sary. Indraindray ianao dia mila mitahiry sary misy zavatra hitanao aminny pejy internet na hetsika ataonao eo...
SpotlightPicView dia programa kely ahafahanao mijery sy manitsy ny sary Spotlight, izay fitambaran-tsary manasaraka hidy amina sary avo lenta nomeni Bing, natolotry ny Microsoft miaraka aminny rafitra fiasa Windows 10. Ireo sary izay haingoini Bing eo aminny efijery fanidiana antsika dia voatahiry amina toerana tsy azo idirana ao aminny...
Ny programa 7GIF dia fampiharana maimaim-poana sy mora ampiasaina ho anao hilalao sary mihetsika gif, izay malaza be aminny Internet, aminny solosainao, toy ny hoe milalao horonantsary ianao. Noho ireo fiasa aminny programa dia azonao atao ny miato na mamerina ireo sary mihetsika ireo aminny fotoana rehetra, mba hahafahanao manitsy azy...
ImBatch dia programa fanodinana sary miaraka amina interface tsara. Aminny alàlanny programa dia ho afaka hanova mora foana mihoatra ny iray ny fisie sary mampiasa script aminny tsindry tokana. Mandritra izany fotoana izany dia afaka manambatra asa samihafa ianao ary mampihatra rakitra an-tsary indray mandeha mba hahazoana ny valiny...
Misaotra ani StudioLine Photo Basic, programa maimaim-poana izay mora ampiasaina, tsy ho very eo afovoanny sarinao ianao. Miaraka aminilay fandaharana, azonao atao ny manamarika ny sary, mandefa sary aminny e-mail isan-karazany aminizay habe tadiavinao, manonta azy ireo aminny vahaolana avo lenta, manomana fampisehoana slide, mamorona...
Ashampoo Slideshow Studio dia rindrambaiko mpanamboatra sary mihetsika manampy ny mpampiasa hanao horonantsary avy aminny sary sy hamorona sary mihetsika. Ashampoo Slideshow Studio dia rindrambaiko manangona ireo fotoana tianao tsy ho faty aminny fampiasana ny sarinao. Miaraka aminny Ashampoo Slideshow Studio dia tsy aseho aminny...
Euler Math Toolbox dia manampy anao hametraka sy handamina ny antontan-taratasinao momba ny asanao sy ny entimodinao ho toy ny sary. Raha mieritreritra mahay mahay sary ianao dia afaka manangona ny asanao sy ny entimodinao mora foana aminny Euler Math Toolbox. Aminity programa ity, izay miorina aminny rafitra matematika, azonao...
Milton dia azo alaina ho fisintomana ho fampiharana izay tsy ampiasaina ny pixel ary azo sintonina ny antsipiriany rehetra. Ohatrinona no tianao hosintonina? Anisanireo mpanao hosodoko te-hanjakazaka aminny antsipiriany rehetra ve ianao? Avy eo i Milton dia iray aminireo programa tsy maintsy ananana aminny solosainao. Hadinoy ny piksel,...
Pixel Art Studio dia karazana programa fanaovana sary ho anny Windows 10. Ny programa nomanini Gritsenko, araka ny efa noresahintsika tetsy ambony, dia karazana fampiharana sary. Ity rindranasa ity, izay azo raisina mora avy aminny Windows 10 Store, dia manome anao ny mety rehetra aminny fampiharana sary mahazatra. Ho fanampinireo fiasa...
Ashampoo Home Designer Pro 3 no programa famolavolana trano tsara indrindra azonao sintonina sy ampiasaina maimaim-poana aminny solosainao Windows. Ao aminny fandaharana voaomana ho anny tsy manam-pahaizana dia mora ny mamolavola rindrina, valindrihana, varavarankely, varavarana, fialan-tsasatra, vavahady, raha fintinina, ireo teboka...
Alternate Pic View dia programa mahasoa izay azonao ampiasaina hijerena ireo sarinao ary hanovana fanovana vitsivitsy. Ny endrika manohana toa ny BMP, JPG, PCX, TGA ary WMF, ny programa dia manana interface mora ampiasaina. Rehefa mampiasa Alternate Pic View dia azonao atao ny manampy ny sarinao aminny interface miaraka amina fomba...
Miaraka aminny Ashampoo Photo Commander dia hitantana ny rakitrao sary sy horonan-tsary rehetra ianao. Ny programa dia hiasa toa ny haino aman-jery multimedia anny solosainao, ahafahanao mamorona arisiva ilaina. Miaraka aminny fandaharana, ny endrika sary, feo, horonan-tsary dia azo ovaina ary tehirizina ao aminny arisiva tsy tapaka....
Speedy Painter dia fampiharana mora ampiasaina izay mamela anao hamorona ny sarinao manokana ary hamonjy azy ireo. Ity rindrambaiko mahomby ity dia voasoratra ao aminny C ++ ary mampiasa ny tranomboky sary OpenGL. Ny fampiharana dia manana fahaizana mamantatra ny tsindry penina sy mifehy ny habenny borosy. Izy io koa dia ahafahanao...
FotoSketcher dia programa kely mahafinaritra azonao ampiasaina hanovana ireo sary nomerika ho sarisary pensilihazo. Aminny alàlanny programa dia azonao atao ny manamboatra ny sarinao vita aminny pensilihazo ao anatinny segondra vitsy, ary manome vokatra vitsivitsy hafa. Izy io no programa fanovana thumbnail mahomby indrindra azonao...
Inkscape dia rindrambaiko fanovana sary maloto loharano misokatra. Mitovy aminireo programa matihanina izay mampiasa ny endrika fisian-tsary haitao haitaitra W3C (SVG), toy ny Illustrator, Freehand, CorelDraw ary Xara X, ny Inkscape dia tsy mitovy aminizy ireo satria afaka tanteraka izany. Afaka manomana valiny matihanina sy sary miaraka...
Ireo izay te hanao sary aminny solosainizy ireo matetika dia manana safidy hampiasa ny rindrambaiko Paint anny Windows na handoa dolara anarivony ho anny fampiharana matihanina. Na izany aza, ny toe-javatra roa dia tsy ampy hamaly ny filàna sy hanimba ny mpampiasa aminny resaka fotoana sy vola. Noho izany, ny fampiharana sary toa ani...
EasySignCut Pro, izay sendra mpanonta sary mahery, dia iray aminireo programa fanaovana fanapahana vina sy fanaovana sonia malaza. EasySignCut Pro, programa tsy manam-paharoa sy matanjaka aminny indostria, dia manamora ny asanny orinasa aminireo fitaovana ananany. EasySignCut Pro, miaraka aminny endriny mandroso sy fitaovana matanjaka,...
Miaraka aminny DVD Slim Free, afaka mamorona endrika fonosana samihafa ianao ho anny CD, DVD, VHS, PS1, PS2, PS3, PSP, Xbox, Nintendo Wii, kapila BlueRay ary maro hafa aminny tsindry vitsivitsy monja. Ankoatrizay, maimaimpoana tanteraka ny programa DVD Slim Free, araka ny tondroinilay anarana. Fomba fiasa: Afaka misafidy ny sarinao...
FreeVimager dia mpijery sary maimaim-poana sy haingana ary mpamoaka sary novolavolaina ho anny rafitra miasa Windows. Mandritra izany fotoana izany dia afaka milalao rakitra audio tsotra ianao, horonan-tsary aminny endrika avi sy CD audio miaraka aminilay programa. Na dia misy programa mitovy aminizany aza, FreeVimager dia misongadina...
Honeyview dia rindrambaiko tsotra sy ilaina natao hijerena ireo sary tianao indrindra. Noho ny volavolany maivana sy ny endriny azo ovaina, dia ao anatinireo programa hijerena sary mety tena tiana. Miaraka aminireo toe-javatra nofidinao nandritra ny fametrahana ny programa dia azonao atao ny mametraka ny Honeyview ho mpijery sary tsy...
ExifTool dia fitaovana tsotra nefa mahasoa izay afaka ankafizinireo izay miatrika tsy tapaka ny rakitra sary, feo ary horonan-tsary. Azontsika atao ny milaza fa ilay programa afaka mamaky, manoratra ary manitsy ny mombamomba ireo rakitra ao anaty rakitra dia tsy misy afa-tsy tsipika iray ihany. Manohana endrika fisie maro, ny programa...
Image Racer dia karazana fampiharana fanovana sary azo ampiasaina mora foana. Raha ny marina dia tsy azo lazaina fa misy ny tsy fisianny programa fanovana sary eny an-tsena; na izany aza, ireo programa rehetra ireo indraindray dia mety manelingelina aminny refy avo lenta sy ny fahazarana mifandray aminny solosaina. Raha mitady vahaolana...
Artweaver dia rindrambaiko fampiharana maimaimpoana sy mora ampiasaina. Azonao atao ny mandoko aminny alàlanity fampiharana ity, izay heverina fa manome ny tontolonny sary hosodoko azo tanterahina indrindra azo atao aminny mpampiasa, ary afaka mampiasa borosy misy habe sy endrika isan-karazany ianao eo am-panaovana izany. Ity...
Aminny alàlanny programa Light Image Resizer dia azonao atao ny manova ny habenny rakitrao aminny sary aminny solo-sainanao tsirairay na aminny ankapobeny aminny tsindry iray na roa. Raha mampihetsika ny safidinao Add to Windows menu ianao aminny fametrahana ny programa dia azonao atao ny manova ny habenny sary nofidinao taminny tsindry...
Epic Pen dia programa aminny solaitrabe izay nitombo laza taminny EBA. Epic Pen dia programa fanaovana sary azonao ampiasaina aminny solosainao, fa tsy toy ny programa fanaovana sary maro hafa, mamela anao hanao sary mivantana aminny Windows ianao. Raha tokony hampiasa azy manokana ianao dia afaka manao sary araka izay irinao aminny...
ShareX dia programa fisamborana lamba izay ahafahanao maka sary aminny efijeryo ary mizara azy eo noho eo. Ny programa dia manolotra efijery feno, fikandrana mavitrika, toradroa ary safidy maro hafa momba ny pikantsary hafa. Ho fanampinizany, ny fanampiana ny mari-drano aminireo pikantsary azonao, ny fakana pikantsary misy mangarahara...
PicPick dia fitaovana famolavolana tsotra sy maimaim-poana. Ny programa dia mpamoaka sary sy sary tena ilaina ho anny mpamorona rindrambaiko, mpamorona sary ary mpampiasa an-trano. PicPick dia ahitana fitaovana fakana sary mahery, tonian-dahatsoratry ny sary, mpaka loko, loko miloko ary maro hafa. Aorianny fametrahana ny programa dia...
Tsy mora ny fanovana sary. Raha te hanitsy ny sary aminny fomba matihanina dia mila mahafantatra antsipiriany maro ianao. Fa noho ny fandaharana FotoGo dia afaka manova sary ianao nefa tsy milentika aminny antsipiriany. Na dia tsy matihanina aza, ny PhotoGo dia afaka manatsara ny sarinao. Misaotra anity programa ity, ny namanao izay...
Ny programa Wings 3D dia niseho ho toy ny programa maodely azonao ampiasaina hanamboarana endrika 3D aminny solo-sainanao. Noho ny maha loharano maimaim-poana sy misokatra anao, ny interface anny programa, izay azonao atao ny manomboka mampiasa soa aman-tsara ary raha vantany vao misintona azy ianao dia misy ny fitaovana rehetra azo...
Blender dia maodely 3D maimaim-poana, sarimiaina, fampisehoana, famoronana clip interaktif ary rindrambaiko playback novolavolaina ho loharano misokatra. Ity rindrambaiko hafa ity, izay tohanana aminny rafitra fiasa lehibe rehetra, ary manome tontolo iainana maimaimpoana ho anny karazana mpampiasa manana fahazoan-dàlana GNU, dia...
SetCAD dia programa fanaovana sary ara-teknika azonao ampiasaina aminny sary 2D sy 3D anao. SetCAD, izay manome tombony lehibe ho anireo izay vao manomboka manao sary ara-teknika miaraka aminny menus sy ny fiasanny baiko aminny teny Tiorka, ary mamela anao hamaha izay baiko manao izay mora kokoa, manome fahafaha-manao betsaka...
Fotowall dia mpamoaka sary tsara indrindra izay miavaka miaraka aminny kaody loharano misokatra sy ny fampiasana tsotra azy. Miaraka aminilay programa azonao ampiasaina araka izay itiavanao azy, azonao atao ny manova ny sarinao malalaka tanteraka. Fotowall, fitaovana tsotra izay tokony hanandrana ireo izay mifampiraharaha aminny sary,...
TSR Watermark Image Software dia rindranasa maimaimpoana ho anireo mpampiasa te-hanome mari-drano ny rakitra sary. Ny programa dia manana ny fahaizana manampy watermarks na aminny soratra na aminny sary. Anisanizany ny vokatra sasany. Ny fandidiana tadiavina dia azo tanterahina ao aminny sehatry ny fangaraharana Watermark transparency...
HyperSnap, rindrambaiko fisamborana mora ampiasaina sy haingam-pandeha haingana, mamela anao hanitsy ireo sary nalaina noho ny mpampanonta azy. Miaraka aminny fandaharana, ny sary an-tsary feno dia azo vonjena aminny lalao voaomana aminny teknolojia DirectX / Direct3D. Miaraka aminny HyperSnap, izay ilaina aminny fampisehoana, fiofanana...
Miaraka aminny Face Off Max, afaka mamorona sary mahatsikaiky sy mampihetsi-po ianao aminny alàlanny fametrahana ny endrikao aminny vatana voasoratra ao aminny programa, ary raha tianao dia azonao atao ny mampitombo ny fahafinaretana aminny fizarana ireo sary ireo aminny olon-tianao. Noho ireo modely efa voaomana ao aminilay programa...
Adobe SpeedGrade Creative Suite (CS) 6 dia rindrambaiko fandefasana loko ho anny tonian-dahatsoratra, mpamokatra sarimihetsika, mpanakanto misy vokany aminny maso, mpandoko loko. Ny asa famoronana dia entina any aminny ambaratonga manaraka aminny tontolonny fanamarihana matihanina miaraka aminny rindrambaiko, izay manolotra fitaovana...
Na dia rindrambaiko kely aza ny Color Quantizer dia afaka manatsara ny sarinao aminny fomba tena mahomby izy io. Misaotra ny Color Quantizer, ny fanatsarana ny loko mandroso dia azo atao aminny sary. Na dia programa natao ho anny mpampiasa mandroso aza izy io dia mahasarika ny mpampiasa rehetra ny interface tsotra-to-use. Izy io koa dia...
Adobe Stock dia serivisy izay manolotra mpamorona sy orinasa amina sary, horonan-tsary, sary an-tsary avo lenta sy tsy misy andriana an-tapitrisany, sary 3D, ary modely hampiasaina aminny tetikasany famoronana rehetra. Azonao atao ny mividy Adobe Stock ho toy ny famandrihana fananana maro. Sintomy ny Adobe Stock Adobe Stock dia manome...
Gameloft mpamorona lalao finday, fantatra aminny lalao hazakazaka mahomby toy ny Asphalt 8, dia namoaka lalao hazakazaka GT Racing 2 hafa ho anny solosaina sy ny takelaka mampiasa ny rafitra fiasa Windows 8.1, aorianny finday sy tablette Android sy iOS. GT Racing 2, izay azonao lalaovina maimaim-poana, dia lalao iray tsy mitovy aminny...
Asphalt Xtreme dia lalao hazakaza-dalao marobe anny Gameloft miaraka aminny sary kalitao ary filalaovana mahasarika. Ao aminny lalao hazakazaka ivelanny lalana, izay azo alaina maimaimpoana aminny sehatra Windows aorianny sehatra Android sy iOS, dia milentika aminny hazakazaka isika aminny alàlanny fisafidianana aminireo karazana fiara...
Advanced IP Scanner dia rindrambaiko maimaim-poana sy mahomby izay manao scan IP aminny antsipirihany aminny rafitrao ary manadihady ny tambajotra eo an-toerana misy ny laharana IP ary mampahafantatra anao. Toetoetra: Mandinika ny tambajotra iray manontolo ao anatinny segondraMba mamantatra izay misy tambajotram-asaMahita HTTP, HTTPS,...